Nhau - Zvaunoda kuziva nezve mini EEC yemagetsi mota
Mafungu achinja uye vazhinji vekuEurope vava kufunga kutenga mini EEC mota yemagetsi.
Nekuchengetedza gasi uye kunzwa kugadzikana mukuziva kuti vari kuita chikamu chavo chepasi, mini EEC mota dzemagetsi dziri kuita "nyowani" pasi rose.
Zvakanakira zveMini EEC Magetsi Mota:
1. Charge kumba.
EVs yese inouya netambo yekuchaja iyo inopinda mune chero yakajairwa 3-pini magetsi emagetsi mumba mako.Izvi zvinopa rudzi rwe "slow charge" inogona kubhadharisa mota yako yemagetsi usiku humwe nepo mabhiri emagetsi anowanzo pazasi.
Neimwe nzira, unogona kutenga yekuchaja iyo yakaiswa nehunyanzvi kumba, ichikupa sarudzo ye "kukurumidza kuchaja."
2. Kuchengetedza magetsi.
Saizvozvo, kwechinhambwe chemakiromita zana, mota dzinowanzoda 5-15 malita epeturu, uye midhudhudhu inoda 2-6 malita emafuta, asi mota dzemagetsi dzinomhanya-mhanya dzinongoda chete 1-3 kWh yemagetsi.
3. Kushamwaridzana nemhoteredzo.
Mota dzemagetsi hadzibudisi magasi ane muchetura uye dzinokonzeresa kusvibiswa kwemhepo, inova ndiyo yekutanga mukana mukuru wemotokari dzemagetsi zvichienzaniswa nemotokari uye dzimwe nzira dzekufambisa.